ဝေမိုးနိုင်(မုံရွာ): **ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုရင် မင်းလည်း အသုံးလုံး မကျေဘူး၊ ငါလည်း အသုံးလုံး မကျေဘူး၊ ဒီတော့ စာလုံးမပေါင်းတတ်တာ ဆန်းလား **
ရေးဆွဲဖို့ရာ ဆေးသားတွေ မစုံလင်ဘူး။
သွန်းဆစ်ဖို့ရာ သစ်သားတွေ မလုံလောက်ဘူး။
သွေးအိုင်ထွန်းဖို့အတွက်တော့ ကျည်ဆန်တွေ ပိုပိုလျှံလျှံရှိတယ်။
စကားလုံးစစ်ထုိးဖို့အတွက်တော့ လက်နက်အင်အား အပြည့်အစုံရှိတယ်။
ဘောလီဘောပုတ်ဖို့အတွက်တော့ ကစားသမားတွေ အစုံအလင်ရှိတယ်။
တောင်းဆိုဖို့အတွက်တော့ နစ်နာသူတွေ အမြောက်အမြားရှိတယ်။
ပေးအပ်မှုတွေအတွက်တော့ ဆင်ခြေတွေ ထောင်းလမောင်းထအောင်ရှိတယ်။
မငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်တော့ ညစ်ထေးထေး စိတ်နှလုံးပေါင်းများစွာ တစ်ပုံတပင်ရှိနေတယ်။
ဆိုတော့ကာ . . . .
ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုရင် မင်းလည်း အသုံးလုံးမကျေဘူး၊ ငါလည်း အသုံးလုံးမကျေဘူး
ကဲ . . . .ပြော ။ ။
အွန်လိုင်းလင်းရောင်ခြည်စာပေ၀ိုင်းရဲ့ Title Series Program မှာ ပါဝင်ရေးသားခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးပါ။ ဒီကဗျာလေးကို အွန်လိုင်းလင်းရောင်ခြည်စာပေ၀ိုင်းရဲ့ ဘလော့ဂ်မှာလည်း တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ ကဗျာလေးကို ရှုစားရင်း လင်းရောင်ခြည်ဘလော့ဂ်လေးကိုလည်း လေ့လာဖို့ ဒီလင့်ခ်ကလေးကနေ သွားရောက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
witch83 January 7, 2013 at 5:36 PM
အင်း.. ရေးထားတာလေးက မှန်လွန်းလို့ ဘာပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး။ ဒီကဗျာလေးကို share ခွင့်ပြုပါ။ လင်းရောင်ခြည်ဘလော့ဂ်လေးကိုလည်း လင့်ချိတ်ပါရစေ။
ဝေမိုးနိုင်(မုံရွာ) January 7, 2013 at 7:41 PM
စိတ်တိုင်းကျ share နိုင်သလို လင်းရောင်ခြည်ဘလော့ဂ်လေးကို လင့်ခ်ချိတ်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါရစေ။
မောင်ရေချမ်း January 7, 2013 at 9:13 PM
မိုးနတ်ကြယ်စင် January 8, 2013 at 4:12 AM
ဒီတော့ စာလုံးမပေါင်းတတ်တာ ဆန်းသလား.....
ကဲ . . . .ပြော...
လန်းလွန်းလို့ ဘာပြောရမှန်းကို တိဝူး...:)
သဒ္ဓါလှိုင်း January 8, 2013 at 9:08 AM
ငြိမ်းချမ်းရေးလို့ ပြောနေပြီး လက်တွေ့မှာ မငြိမ်းချမ်းတဲ့လုပ်ရပ်တွေ လုပ်နေရင်ဖြင့်..
မောင်လမင်းအောင်(သုတစွယ်စုံ) January 14, 2013 at 11:07 PM
ငြိမ်းစိုးဦး January 31, 2013 at 9:02 PM
ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုရင် ... ဟုတ်ကဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုရင် ... ဟုတ်ကဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုရင် ... ပါခင်ဗျ ... ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုရင် ... မောပါ့ ...